Dị ka onye na-abata na kọleji, m na-eleghachi anya na ngwụcha izu nke m na kọleji na njedebe nke ihere, echekwara m na ọ bụghị naanị m. O nwere ike ịbụ nkwupụta sayensị gosipụtara na mgbe a na-etinye ọtụtụ puku afọ 18 n'ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmuo mmadụ malitere na onye ọ bụla na-anụ ọkụ n'obi banyere ihe niile. N’oge ngụkọta oge ọhụụ, ị nwere ike ịbụ ezigbo ndị enyi na onye ọ bụla ị zutere, nwa okorobịa ahụ ị zutere n’ụbọchị mbụ? Ọ bụ n'ezie "Onye ahụ"? Biko gwa m na anọghị m ebe a. O bu ihe nwute, na ịnụ ọkụ n'obi a na-agwụ ike na-abanyekarị na mgbasa ozi mgbasa ozi nke ụlọ akwụkwọ kọleji. Tupu ị na-ekwu maka ụfọdụ nnukwu mgbasa ozi mmekọrịta na-agbagha onye ọ bụla nọ na kọleji ọhụrụ, biko mara na m na-ekwu site na ahụmịhe nke m na di na nwunye ndị a. Nke a bụ ihe ị ga - eme iji zere ịbụ onye kacha akpasu iwe na ịntanetị maka otu izu:
Belata n'ime njakịrị. Ọ bụ ezie na #Ginasredshoe nwere ike na-anọchite anya ihe dị egwu nke mere gị na ezigbo ndị enyi gị ezigbo enyi, enweghị m ihe m ga-ahụ nke ahụ pụtara. Ọ dị mma ịkọ akụkọ egwuregwu oge ụfọdụ site na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ dịkwa mma karịa ịrịọ onye ọ bụla ọzọ ụdị asị ahụ maka ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-akparịta ụka Twitter nwere ihe karịrị 15 Tweets n'etiti ndị enyi gị na-eji hashtag "Ginasredshoe" - onye ọhụụ ọhụrụ gị na-egosi.
Emela album na foto kamera 16,047. Oh, ị zụtara laptọọpụ ọhụrụ na kamera weebụ? Biko echetakwala m site na iji albums akpọ “kamera kamera m na-ese foto”. Ọ bụ ezie na ọ na-atọ ụtọ mgbe ụfọdụ iso ndị enyi gị bipụta foto kamera goof ole na ole, achọghị m ịhụ otu ihe ahụ na sepia na ụdị mmapụta. Ewezuga ndị ọzọ nọ na ọba egwu gị, ọ nweghị onye na-eche n'ezie otu ị nwere ike isi mee ka nku anya gị jiri otu ihe ahụ.
Ejikọla mmekọrịta gị na mgbasa ozi mmekọrịta gị ọnụ. Ọ bụrụ na usoro iheomume Facebook gị gụnyere foto ị Instagrammed na Tweets jikọtara na foto Instagrammed ahụ, ị ​​na-eme ya ezighi ezi. Mekọrịta ihe ndekọ akụkọ mgbasa ozi gị niile ga-akpasu ndị na-eso gị n'ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi iwe. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịkekọrịta ihe na ntanetị mgbasa ozi ọzọ, gbalịa idobe ya na saịtị ọzọ.
Etinyela na ntanetị mgbasa ozi ma ọ bụrụ na ị maghị isiokwu ahụ. Onwe onye ochichi onye isi ochichi ma obu onye ama ama kwuru okwu na mahadum gi tupu afo ohuru? Ọ bụrụ na ịnọghị ya, emela ka à ga-asị na ị nọ. Sinụ na mkparịta ụka mgbasa ozi na-agbasaghị gị. Nke a bụ eziokwu karịsịa banyere ọdachi ndị nwere ike ịme na mbụ na kampos gị. Inye nkọwa banyere ihe ndị a ga-etinye gị na nnukwu ihe egwu nke ịkpasu ụmụ akwụkwọ nọ na kampos maka mmemme ahụ iwe.
Biko, BIKO, debe ihe osise ndị ahụ na usoro iheomume gị. Ihe osise ndị a agaghị etinye mmanya na-aba n'anya - foto ọ bụla ị na-ese nke gụnyere akara udo, ihu ọbọgwụ ma ọ bụ ịsụgharị ire gị ga-abụrịrị n'ezie ihere na enweghị ọrụ n'ime afọ atọ. Foto ndị ahụ bụ ihe kpatara na ndị mmadụ achọghị ịnabata oge Facebook. Tụkwasị na nke ahụ, foto ndị dị ka ndị a ga-eme ka otu nne na nna gị nwere Facebook nwee ike ikwu okwu ha - ọ ga-asịkwa "Ndị ahụ bụ ụbọchị!" ma ọ bụ “Ka anyị kwuo okwu banyere nke a mgbe ị laruru ezumike maka oge ezumike.”
Bịanụ - Amaara m na ịchọrọ icheta ihe gbasara mahadum ugbu a. Site na Ọgọstụ 20 ruo Septemba 21, anyị na-enyefe ụmụ akwụkwọ kọleji dị n'ime anyị ebe aMpempe akwụkwọ . Anyị ga-eziga akwụkwọ ndụmọdụ ga-enyere gị aka (na ndụ) ndụmọdụ. Oh, anyị na-enyekwa ụmụ akwụkwọ kọleji anyị Starter Plan n'efu. LeleeMpempe akwụkwọ '' Laghachi na Schoollọ Akwụkwọ peeji mkpọsa maka ozi ndị ọzọ.
Tags: content MarketingIzu gara agaSocial Media Marketing
Sep 1, 2012 na 4: 46 AM
Chaị. ọ bụ naanị m ka ọ bụ onye a bụ uptight onwe onye ezi omume anụọhịa?
Nov 15, 2012 na 5:51 AM
Gụ blọọgụ a dị ka mama m gwara m!
Feb 17, 2013 n’elekere 3:17 nke abali
ị nweghị foto ọ bụla na facebook gị nke ị na-agbatị ire gị, na-eme akara ngosi udo, ma ọ bụ na-atọ ụtọ ma ọlị? ọ dị ka square. ma ọ bụrụ na a ga-eme n'ọdịnihu na-arụrụ ọrụ ga-eleda gị anya n'ihi na ị na-n'ịnọgide ire gị na a foto na gị onwe facebook, Echeghị m na ị ga-achọ na-arụ ọrụ maka ha na agbanyeghị…